Iziganeko ezilungileyo zeLwesihlanu - Isihlandlo sokufa kukaYesu
Iziganeko ezilungileyo zeLwesihlanu ezijikeleze ukubethelwa kukaYesu Kristu
Ngexesha lonyaka we- Easter , ngakumbi ngoLwesihlanu oLungileyo , amaKristu agxininise ekutshiseni kukaYesu Kristu , okanye ekuhluphekeni kwakhe nokufa esiphambanweni.
Iiyure zokugqibela zikaYesu emnqamlezweni zahlala malunga neeyure ezintandathu. Siza kuphula iziganeko ezilungileyo zikaLwesihlanu njengoko kubhaliwe kwiZibhalo, kubandakanywa neziganeko kwangaphambili kwaye emva kokubethelela ngokukhawuleza.
Qaphela: Amaxesha amaninzi kwezi ziganeko azibhalwa kwiZibhalo.
Umlinganiselo wexesha elilandelayo ubonisa ukulandelelana kweziganeko.
Ukufumana okungakumbi ngokufa kukaYesu: Kutheni Kwafuneka UYesu Abulale ?
Hamba ngeenyawo kunye noYesu: Iveki eNgcwele yexesha lexesha .
(Mateyu 26: 20-30; Marko 14: 17-26; Luka 22: 14-38; Yohane 13: 21-30)
(Mateyu 26: 36-46; Marko 14: 32-42; Luka 22: 39-45)
UYesu uphelelwe kwaye uboshwe
(Mateyu 26: 47-56; Marko 14: 43-52; Luka 22: 47-53; Yohane 18: 1-11)
Iinkokheli Zenkolo Zigxeba uYesu
(Mateyu 27: 1-2; Marko 15: 1; Luka 22: 66-71)
Iziganeko eziLwesihlanu ezilungileyo
UYesu Ubeka Uvavanyo phambi koPilato
(Mateyu 27: 11-14; Marko 15: 2-5; Luka 23: 1-5; Yohane 18: 28-37)
UYesu wathumela kuHerode
(Luka 23: 6-12)
UYesu wabuyela kuPilato
(Mateyu 27:26; Marko 15:15; Luka 23: 23-24; Yohane 19:16)
UYesu Ulahlwa Khalvari
(Mateyu 27: 32-34; Marko 15: 21-24; Luka 23: 26-31; Yohane 19: 16-17)
9 am - "Ixesha lesithathu"
UYesu Ubethelwe esiphambanweni
Marko 15: 25 - Kwakuyure lesithathu xa bambethelela emnqamlezweni. (NIV) . (Iyure lesithathu ngexesha lamaYuda lalibe li-9 ngomhla)
ULuka 23:34 - UYesu wathi, "Baba, baxolele, kuba abazi into abakwenzayo." (NIV)
AmaSoldi Cast Cast for Izambatho zikaYesu
UYesu Uthuka kwaye Uhlekisiwe
UMateyu 27: 39-40 - Kwaye abantu abadlulayo babememeza ngokuxhatshazwa, bekrazula iintloko zabo. "Ngoko unokutshabalalisa indlu kwaye uyayakha kwakhona ngeentsuku ezintathu, ngaba wena ke, ukuba unguNyana kaThixo , zihlangule uze wehla esiphambanweni!" (NLT)
Marko 15:31 - Ababingeleli abaziintloko kunye nabafundisi benkolo banamnye uYesu. Babesindisa abanye, "bahlekisa," kodwa akakwazi ukuzisindisa ngokwakhe! " (NLT)
ULuka 23: 36-37 - Amajoni amhlekisa naye, ngokumnika isiselo sewayini elimuncu. Bamemeza bathi kuye, "Ukuba unguKumkani wamaYuda, zihlangule!" (NLT)
ULuka 23:39 - Omnye wabenzi bezono ababethoxayo apho wamthuka wathi: "Awuyena uKristu? Zihlangule wena nathi!" (NIV)
UYesu kunye noLwaphulo-mthetho
ULuka 23: 40-43 - Kodwa omnye umntu olwaphulo-mthetho wamkhuza. Wathi: "Musa ukwesaba uThixo, kuba uphantsi kwesigwebo esifanayo? Siyahlwaywa ngokufanelekileyo, kuba sifumana izinto zethu ezifanelekileyo, kodwa lo mntu akenzanga nto ephosakeleyo."
Wandula ke wathi, "Yesu, ndikhumbule xa ungena ebukumkanini bakho."
UYesu wamphendula wathi: "Ndiyanitshela inyaniso, namhlanje uya kuba nam naparadesi." (NIV)
UYesu uthetha kuMariya noYohane
Yohane 19: 26-27 - Xa uYesu ebona unina ehleli apho ngaphandle komfundi amthandayo, wathi kuye: "Mfazi, uyindodana yakho." Wathi kumfundi, "Ungunyoko." Ukususela ngoko, lo mfundi wamthabatha waya ekhaya. (NLT)
Ngomso - "Ixesha lesithandathu"
Ubumnyama bubaleka umhlaba
Marko 15:33 - Ngelixa lesithandathu, ubumnyama beza phezu kwelizwe lonke, kwada kweyure lesithoba. (NLT)
UYesu Ukhala kuYise
Mateyu 27:46 - Ngelixa lesithoba, uYesu wamemeza ngelizwi elikhulu esithi, "Eli, Eli, lama sabakthani?" Oko kukuthi, "Thixo wam, Thixo wam, undithini na?" (NKJV)
Yohane 19: 28-29 - UYesu wayesazi ukuba yonke into yayigqityiwe, kwaye ukuzalisekisa iZibhalo wathi, "Ndiyanxaniwe." Kwakuhleli idibansi yewayini elimuncu, ngoko ke bayifaka isiponji kuyo, bayifake iqela lehisophi, kwaye walibeka emlonyeni wakhe. (NLT)
Yohane 19: 30a - Xa uYesu wayinambitha, wathi, "Kuphelile!" (NLT)
ULuka 23:46 - uYesu wamemeza ngelizwi elikhulu, "Baba, ezandleni zakho ndibeka umoya wam." Xa wayesethetha oku, waphefumula. (NIV)
3 pm - "Ixesha lesithoba"
Iziganeko Ukulandela Ukufa KukaYesu
Mateyu 27: 51-52 - Ngaloo mzuzu ikhefu lethempeli laqhekeka emibini ukusuka phezulu ukuya phezulu. Umhlaba wazamazama kwaye iingxondorha zahlukana. Amangcwaba avulekileyo kwaye izidumbu zabantu abaninzi abangcwele ababefile zavuswa. (NIV)
I Centurion - "Ngokuqinisekileyo wayeyindodana kaThixo!"
(Mateyu 27:54; Marko 15:38; Luka 23:47)
Amajoni Aphula ii-Thives 'Legs
(Yohane 19: 31-33)
Umkhosi ugwaza uYesu kwicala
UYesu ulalelwa kwiTombbu
(Mateyu 27: 57-61; Marko 15: 42-47; Luka 23: 50-56; Yohane 19: 38-42)
UYesu Uvuka Kwabafileyo
(Mateyu 28: 1-7; Marko 16: 1; Luka 24: 1-12; Yohane 20: 1-9)
Ngakumbi malunga nokubhiyozela iPasika
Oluthe xaxa malunga nokubethelwa
Umthendeleko wePhasika kumaKristu
Iziprofeto zeTestamente Endala zikaYesu
I-Top 5 Ininzi yamaCarcastic Comedians
I-RAMIREZ Igama lomxholo kunye nomthombo